နူးညံ့တဲ့မင်းသမီးလေးအသွင်ဆောင်မဲ့ BeaMermaid & Make waves eyeshadow Palette! | CosmeticMyanmar
Home » Article » နူးညံ့တဲ့မင်းသမီးလေးအသွင်ဆောင်မဲ့ BeaMermaid & Make waves eyeshadow Palette!
နူးညံ့တဲ့မင်းသမီးလေးအသွင်ဆောင်မဲ့ BeaMermaid & Make waves eyeshadow Palette!
ပုံမှန်မထင်မရှားမသိသာတဲ့ eyeshadow လေးတွေနဲ့မတူ တမူထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့အရောင်တွေနဲ့ ထုတ်လုပ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Tarte ရဲ့ BeaMermaid & Make waves eyeshadow Palette လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒီ Palette လေးကိုတွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲ နုပျိုတက်ကြွခြင်းဆိုတဲ့အရာကို ခံစားရစေမှာပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကမာအသွင် ဒီဇိုင်းနဲ့ ပါဝင်တဲ့ အရောင်အသွေးတွေဟာ စိုပြေပြီး Girly ဖြစ်တာကြောင့် ပျိုမေတို့အထူးနှစ်ခြိုက်ကြမှာ အမှန်အကန်ပါပဲ။ အရောင်အားဖြင့် nude beach (pale gold luster), shore thing (sienna), frosé (rose gold luster), beach please (maroon luster), mermosa (warm gold), cavern (burgundy luster), fin-tastic (antique bronze), sandbar (milk chocolate), salt water (pale taupe luster), shipwreck (mahogany), shell yea (bronze luster), bubbles (lilac duochrome), splash (turquoise luster), lagoon (teal luster) ဆိုပြီးပါဝင်တဲ့အပြင် Matte & Metallic shades ဖြစ်တာကြောင့် လိုသလိုအလွယ်တကူ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး လင်းလက်တဲ့ မျက်ဝန်းတစုံကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။ တကယ်ပဲ Aqua ရဲ့ အငွေ့အသက်ကို ခံစားစေနိုင်အောင် ဖန်တီးထားပြီး မှေးမှိန် ပျောက်ပျက်သွားခြင်းမှကင်းဝေးစေဖို့ရန်အတွက် Creamy powder formula ကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ မြင်တွေ့ရတဲ့အရောင်နဲ့ လက်တွေ့အသုံးပြုတဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့ အရောင်တွေဟာ ထပ်တူကျတာကြောင့် တကယ်ပဲ အရေအသွေးပြည့်မှီတဲ့ Eyeshadow Palette လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း Eyeshadow Brushes လေးတွေကို အသုံးပြုပြီး စိတ်တိုင်းကျရောစပ်ဖန်တီးနိုင်တာကြောင့် အသုံးပြုရအရမ်းအဆင်ပြေ မှာပါ။ Limited Edition ဖြစ်တဲ့အပြင် Tarte လို့ဆိုတာနဲ့ နှစ်ခါပြန်တွေးစရာမလိုလောက်အောင် ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝယ်ယူလိုတယ်ဆိုရင် အပြေးလေးမှာထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်။ ​ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၄၂ မှစပြီး ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။
Image Source: tartecosmetics.com
Matte type Sweatproof ဖြစ်တဲ့အပြင် Foundation ကို Shade 40 တောင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အလန်းစား Power Play Foundation!
လန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ မျက်ဝန်းတစုံကို ပြန်လည်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် C-Tango Multivitamin Eye Cream!